Kana iwe uchida chero rumwe ruzivo kana uine chero mibvunzo nezve yedu yekuvanzika mutemo, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu. At Martech Zone, kuvanzika kwevashanyi vedu kwakakosha zvakanyanya kwatiri. Iri gwaro repamutemo rekuvanzika rinoratidzira mhando dzemunhu ruzivo rwunogamuchirwa uye rwunotorwa ne Martech Zone uye kuti inoshandiswa sei.
Kufanana nemamwe mawebhusaiti mazhinji, Martech Zone inoshandisa mafaira erogi. Ruzivo irworwo mukati megogi mafaira runosanganisira internet protocol (IP) kero, mhando yebrowser, Internet Service Provider (ISP), zuva / nguva chitambi, kutaurisa / kubuda mapeji, uye nhamba yekubaya kuongorora maitiro, manejimendi saiti, kuteedzera kufamba kwemushandisi kutenderedza saiti, uye unganidza ruzivo rwehuwandu. IP kero, uye rumwe ruzivo rwakadai haruna kubatana kune chero ruzivo rwunozivikanwa pachako.
Martech Zone inoshandisa makuki kuchengeta ruzivo nezvevashanyi zvavanofarira, rekodhi ruzivo-rwakananga ruzivo pamapeji api anowanikwa nemushandisi kana kushanyira, gadzirisa peji reWebhu zvemukati zvichibva kune vashanyi browser mhando kana rumwe ruzivo urwo mushanyi anotumira kuburikidza nebrowser yavo.
Google, seyechitatu mutengesi, inoshandisa makuki kushambadzira pa Martech Zone.
Kushandiswa kweGoogle kweDART kuki kunoigonesa kushambadzira kune vashandisi zvichibva pakushanya kwavo Martech Zone nedzimwe nzvimbo dziri paInternet.
Vashandisi vanogona kusarudza kunze kwekushandisa iyo DART kuki nekushanyira Google kushambadza uye zvemukati network zvakavanzika mutemo
Vamwe vevatinoshamwaridzana navo vanogona kushandisa macookie nemawebhu beacon pane yedu saiti. Vatinoshamwaridzana navo vanosanganisira Google Adsense, Commission Junction, Clickbank, Amazon nevamwe vanobatana nevatsigiri.
Martech Zone haina mukana wekudzora kana makuki ayo anoshandiswa nevashambadzi vechitatu.
Iwe unofanirwa kubvunza maringe nemitemo yakavanzika yeaya evatatu-bato ad server kuitira kuti uwane rumwe ruzivo nezve maitiro avo pamwe nemirayiridzo yekuti ungabude sei pane mamwe maitiro. Martech Zone'' Yakavanzika mutemo haishande kune, uye isu hatigone kudzora zviitiko zvevamwe vatengesi kana mawebhusaiti.